Ahoana ny fanesorana doka mahasosotra amin'ny findainao - Victor Mochere
Noho izany, efa teo daholo isika – namaky lahatsoratra na nijery horonan-tsary mahafinaritra rehefa manomboka mipoitra tampoka ny doka mahasosotra ary manelingelina ny traikefantsika. Tsy vitan'ny hoe mahasosotra ireo doka ireo, ireo doka sy viriosy mahasosotra dia matetika mifandray, ka mampidi-doza ho an'ny finday sy ny takelaka. Ny fanesorana ireo doka mahasosotra dia toa hany fomba hampiasana tanteraka ny fotoanantsika satria mametra ny fanelingelenana tsy ilaina amin'ny faran'izay kely indrindra. Na mitady hifantoka amin'ny asanao ianao, na mamaky na mijery, dia tsy maintsy mandeha ny dokam-barotra rehetra manelingelina.
Ahoana ny fanesorana doka manelingelina amin'ny telefaona Android
Ahoana ny fanesorana doka manelingelina amin'ny fitaovana iOS
AdBlockers sy ny tombontsoany
Toa baomba amin'ny doka manorisory mihoatra noho ny tompon'ny iPhone ireo mpampiasa Android, ka izay no mahatonga azy ireo hikaroka hatrany ny “block ads annoying chrome”. Ny vaovao tsara dia ny mpamorona Chrome dia nikarakara interface tsara ho an'ny mpampiasa ary mamela ny mpampiasa hanakana ny ankamaroan'ny doka - na farafaharatsiny, ny ankamaroan'ireo doka pop-up manelingelina ireo. Izany rehetra izany dia midina amin'ny dingana tsotra vitsivitsy:
Sokafy ny browser Chrome anao
Tsindrio ny 'Menu'
Mandehana any amin'ny 'Settings'
Midira midina mandra-pahitanao ny fizarana 'Advanced' ary tsindrio ny 'Settings Site'
Eo ambanin'ny menio 'Setting Site', mifidiana 'Pop-ups and redirects'
Peho ny bara-toggle izay milaza hoe 'Sakanana tsy hiseho pop-ups sy redirects' mankany amin'ny 'Nosakanana'
Rehefa vita dia miverena ao amin'ny menio 'Setting Site', fidio ny 'Notifications'
Peho ny bara hidina izay milaza hoe 'Afaka mangataka fampandrenesana ny tranokala' amin'ny 'Nosakanana'
Izany no fomba haingana sy azo antoka indrindra hanakanana ny sasany amin'ireo doka mahasosotra, saingy indrisy - tsy izy rehetra. Ohatra, tsy hanampy amin'ny doka mahasosotra ao amin'ny YouTube na tranonkala hafa mampiseho doka izany raha tsy manana kaonty premium ianao. Mba hanaovana izany dia mila AdBlocker feno ianao.
Ankehitriny, mba ho rariny tanteraka - ahoana no hanesoranao doka manelingelina amin'ny iPhone? Mitovy amin'izany koa raha nametraka Chrome amin'ny navigateur default ianao. Raha Safari ny default anao dia:
Mandehana midina mankany Safari
Ampifamadiho ny 'Sakanana Pop-ups' ao amin'ny menio ankapobeny Safari
Tena izany - tahaka ny amin'ny finday Android, ity safidy ity dia hanakana doka pop-up mahasosotra, saingy indrisy - tsy izy rehetra. Ary izany no antony ilanao AdBlocker.
AdBlockers dia rindrambaiko manokana izay mahomby kokoa noho ny filalaovana fotsiny amin'ny firafitry ny navigateur default. Mazava ho azy, toy ny ankamaroan'ny zavatra eo amin'ny fiainana, ny fitaovana tena mahomby dia karamaina, saingy azo atao foana ny manomboka amin'ny dikan-teny maimaim-poana. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny blockers dia manana dikan-teny tsotra kokoa, maimaim-poana ary misy karama izay miantoka ny fiarovana farany amin'ny pop-up manelingelina. Ny antony iray hafa handinihana ny AdBlockers dia ny mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny navigateur miely patrana (tena Chrome sy Safari), izay midika fa tsy miankina amin'ny maodely telefaona na rafitra fiasanao izy ireo. Betsaka ny fitaovana AdBlocker azonao ampiasaina hanakanana doka manelingelina amin'ny fitaovanao.
Ny toro-hevitra farany ho an'ny mpampiasa Android dia ny fampiasana rindrambaiko antivirus kalitao satria, tsy toa an'i Apple, dia misy viriosy ratsy kokoa ho an'ny fitaovana Android. Ary, araka ny efa voalazanay, ny doka manelingelina dia mety hanimba sy mety hampidi-doza ho an'ny rindrambaiko sy angon-drakitra manokana, koa ny antony voalohany hanakanana ny doka manelingelina dia ny fiarovana ny angona sy ny maha-izy azy.